यदि कसैले खेतलाई त्यतिकै छोडिदियो । त्यसमा खेती गरेन । केही पनि मेहनत गरेन भने त्यस्तो खेत त बिस्तारै–बिस्तारै बाँझो बन्न पुुग्दछ । यदि त्यहाँ उन्नत किसिमको बीउ रोपेनौँ, पानी लगाएनौँ भने के हुनेछ ? जहाँ गहुँ फल्थ्यो, जहाँ फलफूल हुनेगथ्र्यो— अब त्यहाँ मानिसका लागि केही काम नलाग्ने चीजहरू उम्रिन थाल्छन् । त्यो खेत बाँझो बन्न थाल्दछ ।
यदि तपाईंले कुनै त्यस्तो बिरुवा रोप्नुभयो जसले फल अथवा तरकारी दिन्छ भने तिनलाई पानी चाहिन्छ । यदि तिनले पानी पाएनन् भने त्यो खेतमा त्यस्ता चीजहरू फल्दछन् जसलाई पानीको आवश्यकता पर्दैन— जस्तै : खर, घाँस, पात आदि । त्यसकारण हामीले पनि आफ्नो जीवनमा यो जीवनरूपी खेत पाएका छौँ । यसमा हामीले कतिको परिश्रम गरिरहेका छौँ ? यो खेतमा हामीले कुन–कुन बाली लगाएका छौँ ? यो खेतमा कुनचाहिँ बाली रोपेका छाँै ? यस जीवनरूपी खेतमा पनि यदि हामीले मिहिनेत गरेनौँ, पानी हालेनौँ भने यो पनि बिस्तारै–बिस्तारै बाँझो हुँदै जानेछ ।
वास्तविकता के हो भने तपाईंले आफ्नो यस जीवनरूपी खेतमा प्रत्येक श्वासका साथ केही न केही रोपिरहनुभएको छ । जुन प्रत्येक श्वास तपार्ईंभित्र चलिरहेको छ— भित्र आएर गएपछि एउटा बीउ रोप्नुभयो । फेरि दोस्रोपटक भित्र आउँछ र जान्छ—फेरि अर्को बीउ रोपियो । चाहे तपाईंले बीउ रोप्ने कोसिस गर्नुहोस् या नगर्नुहोस्, बाली त रोपिँदै छ । यसमा तपाईंले पनि केही गर्न सक्नुहुन्न । यदि तपाईंले बीउ नरोपियोस् भन्ने चाहना राख्नुभयोे भने पनि यो सम्भव छैन । केवल यतिमात्र सम्भव छ, कुनचाहिँ बीउ रोप्न चाहनुहुन्छ ? यो बुझ्नुपर्ने कुरा छ— अहिलेसम्म तपाईंले कुनचाहिँ बाली लगाउनुभयो ? तपाईंले श्वास लिइरहनुभयो तर तपाईंको मन कहिले यता दौडिरहन्छ त कहिले उता दौडिरहन्छ । धेरैजसो अन्य थुप्रै कुराहरूका बारेमा चिन्ता लागिरहन्छ तर तपाईँले यो जुन श्वास अहिले भर्खरै लिनुभयो— योसँग कुनचाहिँ बीउ रोप्नुभयो ? यसका बारेमा तपाईं चिन्तै गर्नुहुन्न । यस संसारमा छौँ भने यस कुराका बारेमा पनि सोच्नुपर्छ र अरु कुराका बारेमा सोच्नुपर्छ । तर, त्यसको अर्थ त्यसैमा भएभरको समयलाई बिताउनुपर्छ भन्ने पनि होइन । जब तपाईँ खाना पकाउनुहुन्छ भने त्यसमा नुन पनि हाल्नुहुन्छ । तर, त्यसको मतलब तपाईँ बसी–बसी नुनमात्रै हालिरहनुहुन्छ भन्ने पनि होइन । नुन हाल्नाले खाने कुरामा स्वाद आउँछ । स्वादिलो हुन्छ । तर, यसको तात्पर्य जति धेरै हालिन्छ त्यति नै धेरै स्वादिलो हुन्छ भन्ने होइन । यदि धेरै हाल्यौँ भने, जुन कुराले स्वादिलो हुन्थ्यो, अब त्यसैले खाने कुरालाई खान नसकिने बनाइदिन्छ । यस संसारमा हरेक विषय खाने कुरामा नुन धेरै हालेपछि उत्पन्न हुने समस्या जस्तै भइरहन्छ । यस जीवनमा केवल एउटै कुरा छ । यसलाई तपाईंले जति धेरै चिन्ता गर्नुहुन्छ, तपाईंलाई त्यति नै धेरै आनन्द मिल्नेछ । त्यो चीज तपाईंभित्र रहेको प्रत्येक श्वासमा चलिरहेको छ । आपूmले कतै खोज्नुपर्दैन ।
प्रत्येक श्वास— जुन अमूल्य छ । जुन तपाईंभित्र चलिरहेको छ । जुन श्वास तपाईंभित्र आउँछ त्यसले तपाईंका लागि के ल्याउँछ ? जसका कारणले तपाईं मुस्कुराउन सक्नुहुन्छ, जसका कारणले तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, जसका कारणले तपाईंले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ । त्यही चीजका कारणले आज यस संसारमा सबै कुरा भइरहेको छ≤ ठूला–ठूला आविष्कार भएका छन् । नयाँ–नयाँ कुराहरू बनिरहेका छन्, अचम्म–अचम्मका कुराहरू बनिरहेका छन् । तर, जसका कारणले यी सबै कुरा भइरहेका छन् ती चीजप्रति कसैले पनि ध्यान दिइरहेका छैनन् । यदि त्यो चीज निस्किएर गयो भने त्यसपछि न कोही वृद्ध हुन्छ, न कोही जवान रहन्छ; न कोही नोकर, न कोही मालिक । ती सबै कुरा समाप्त !
जब त्यो हृदयको ढोका खुल्दछ तब मानिस भित्रतिर जान्छ । भित्र के छ ? भित्र त्यो चीज छ जुन अन्तिम क्षणसम्म मानिससँगै रहनेछ । त्यसको कुनै मूल्य छैन । त्यो अमूल्य छ ।
त्यो सदैव तपाईंसँगै छ र तपाईंसँगै रहनेछ । तपाईँ त्यसबाट उम्किन सक्नुहुन्न । जुन दिन तपाईं त्यसबाट मुक्त हुनुहुनेछ, तपाईँ रहनुहुने छैन । जबसम्म तपाईं जीवित हुनुहुन्छ तबसम्म त्यो तपाईंसँगै रहन्छ । त्यो कुनचाहिँ ढोका हो ? त्यो ढोका हो— साँचो शान्तिको ढोका । वास्तविक शान्तिको ! उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस् र आफ्नो यो दिनको सुरूवात गर्नुहोस् । बिउँझने समय भइसकेको छ । किनभने, तपाईंले आजसम्म जति पनि ठूला–ठूला, एकदम राम्रा–राम्रा सपना देख्नुभएको छ, यथार्थमा ती सारा सपनाहरूभन्दा पनि राम्रो छ— यो श्वासको वास्तविकता ! आफ्नो जीवनमा त्यो दया र करुणालाई हेर्नुहोस् । यदि तपाईं दया र करुणालाई अनि यो दया र करुणाको वास्तविक प्रतीकलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो श्वासलाई चिन्नुहोस् । यो हो दया ! यसभन्दा धेरै दया मानिसमाथि हुनै सक्दैन । प्रत्येक श्वासमा आउने र जाने जुन माला छ— त्यसमा वास्तविक सुख छ, वास्तविक शान्ति छ । त्यसैका कारणले यो चेतना छ । त्यसकै कारणले यो जीवन छ, त्यसैका कारणले तपाईं हिँड्न सक्नुहुन्छ । तपाईँ जे हुनुहुन्छ, त्यसैका कारणले हुनुहुन्छ । यसमा त त्यस्तो आनन्द छ जुन म सदैव प्राप्त गर्न चाहन्छु । यस्तो होइन— आनन्द लियो अनि सकियो । आजसम्म जीवनमा त्यस्तो आनन्दको अनुभूति गरिएकै छैन जुन सदाका लागि रहोस् । हरेक खालको आनन्द आउँछ र सकिन्छ । तर, यो आनन्द सदैव रहन्छ । जब तपाईंले आफ्नो जीवनमा यस कुरालाई राम्रोसँग स्वीकार गर्नुुहुन्छ— म पनि एक–एक श्वासमा त्यो चीजको बीउ रोपूँ जसको बाली भिœयाएपछि आफ्नो जीवनमा मैले कहिल्यै भोकै बस्न नपरोस् । अनि मात्र, यो जीवन पाउनुको सार्थकता हुनेछ । यो जीवनरूपी खेतलाई बाँझो हुन नदिनुहोस् । किनभने, आवश्यकतै छैन । तपाईंभित्र कति धेरै पानी छ भनेर तपाईँ सोच्न पनि सक्नुहुन्न । एकदमै मिठो र स्वच्छ पानी छ । त्यो सबै तपाईंभित्रै छ । त्यसको आनन्द लिनुहोस् । तिर्खा मेटिसकेको आनन्द लिनुहोस् र आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउनुहोस् ।
‘संकट’ समाधानमा एकजुट बनौँ
पृथ्वी, वनस्पति, जीव र कोरोना भाइरस